အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မြန်မာပြည်သား လေး ရိုင်းတယ် ကွယ်
မြန်မာပြည်သား လေး ရိုင်းတယ် ကွယ်
မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၂/တဒဂ (နိုင်) ၀၅၃၂၇၀
အသက် - ၂၆ နှစ်
မွေးနေ့ - ၃၀ . ၁၀.၁၉၈၅
ပညာအရည်အချင်း - B.SC (Geology)
အလုပ်အကိုင် - အငယ်တန်းစာရေး ( ဧရာဝတီဘဏ်)
နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်( ၂၅၆၃ (က) ၊ ဗညားဒလလမ်း၊(၇၁)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။
Phone Number - 01 707914/ 0973125734
ပထမဆုံး ဒီလူရဲ့ biography ကို အရင်ပြောပြထားတာပါ။ ဒီကောင် အရင်က
မြေတိုင်းအလုပ်သမား အလုပ်ကမရှိတာ များတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ရန်ကုန်က
နဲ့ online ပေါ်မှာ ခင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အပြင်မှာ တွေ့ကြ၊ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတာပေါ့...။ဒီကောင်က
ရုပ်ရည်လေးက ရိုးရိုးသားသားပုံစံလေးဗျ။ ဒါနဲ့ပဲ
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမလေးကလည်း အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးပါ။ သူ့ဘာသာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပျော်ပျော်ပါးပါး နေတတ်ပေမယ့် သူ့အပျိုစင် ဘ၀လေးကိုထိန်းသိမ်းထားတာ ဒီကောင်နဲ့
မတွေ့ခင်ထိပေါ့ဗျာ။ နောက်ပိုင်း ဒီကောင့်ကို ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းက တအားချစ်ပြီး အလိုလိုက်ခဲ့တာ သူ့အပျိုစင်ဘ၀လေးပါ ပါသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ....။အစပိုင်းမှာ ဒီကောင်က
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကို တော်တော်ချစ် တော်တော်ဂရုစိုက်တာပေါ့ဗျာ.....။ဂရုစိုက်မှာပေါ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက ၀င်ငွေကောင်းတယ်လေ။ သူလိုအပ်တာတွေ မှန်သမျှ ပူဆာစရာမလိုအောင်ကို
လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၁ နှစ်ကျော်လောက်မှာ
လက်ထပ်ဖို့အတွက် ငွေစုချင်လို့ အလုပ်လိုချင်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလည်း ကြိုးစားပမ်းစားရှာပေးလိုက်တာ ဧရာဝတီဘဏ်မှာ
ဒီကောင်အလုပ်ရသွားတယ်။ အလုပ်ရခါစတော့ ဒီကောင်က
အချိုးမပြောင်းသေးပါဘူး....။ အလုပ်က မန္တလေးကို Transfer နဲ့
ပို့လိုက်တော့ ဒီကောင်က (ဇ) ပြလာတာပဲ။ မန္တလေးရောက်ပြီး (၂)လ အကြာမှာ
မန္တလေးသူတစ်ယောက်နဲ့ ငြိသွားတယ်။ ရိုးရိုးငြိရင်
ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်....။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က လက်သွက်တယ်ဗျ
မန္တလေးသူကိုလဲ ၀ါးပစ်လိုက်တယ်.။မန္တလေးသူ ယုံအောင်လည်း တရားမ၀င်စာချုပ်မှာ
သိခဲ့ပေမယ့် မမေးရက်ဘဲ တစ်နေ့ပြင်လာနိုးနိူးနဲ့
မျှော်လင့်နေတာပေါ့....။သူတို့ဘဏ်က ရန်ကုန်ကို Transfer
ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ....။မန္တလေးမှာ စာချုပ်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးလာလို့
ဒီကောင်က ရန်ကုန်မှာ ငြိမ်နေမယ်ထင်လား..........?
ပြောရှာပါတယ်....။ဒါကို ဒင်းက လက်မခံဘူးလေ...။ငါ့အမှားတွေ ပြင်ပါ့မယ်
ဆိုပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို အယုံသွင်းတယ်။
ငါယူမယ့် မိန်းမကလည်း မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်ရမယ် လို့ လည်းသူ
ဘယ်လိုပြောတယ်ထင်လဲ.....ရန်ကုန်မှာ အိမ်ကပေးစားမယ့်သူရှိတယ်တဲ့ (အဲဒါ
မန္တလေးသူကိုပြောပါတယ် မင်းကိုမှ မရရင် ဘယ်မိန်းမကိုမှ
မယူပါဘူးတဲ့...။မန္တလေးသူလေးကလဲ ယုံရှာပါတယ်။ဒီကောင်က သူ့ရဲ့ဆန္ဒကို
သိက္ခာနဲ့ မထိန်းနိုင်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမလေးကိုလဲ
သူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတယ်...။ သူက ဒီကောင်ကို အရင်ဆုံးပြောပြပြီး
ယူဖို့ပြောတော့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချပစ်ဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းပြီး
လက်ထပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးထားပါတယ်...။သူ့အတွေးထဲမှာတော့ မိန်းမ
သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့အတွက် ရှိခိုးပြီးတောင် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်....။ဒါပေမယ့်
ဒီကောင်က ခါးခါးသီးသီးကို ငြင်းခဲ့ပါတယ်...။ သူငယ်ချင်းမလေးခမျာ
ဖျက်မချရက်တော့ ဒီကောင့်မိဘတွေဆီ အားကိုးတကြီးပြေးပြောရတာပေါ့။
ဒီကောင့်မိဘတွေကလည်း အရမ်းကို လူပီသပြီး
မိသားဖသားပီပီ လာရောက်တောင်းရမ်းပါ့မယ်လို့ အလွယ်ပြောဆို ချော့မော့ပြီး
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမလေးကို အိမ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့.....။
ဒီမအေက ဒီသားမွေးထားတာ သဘာဝကျပါတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့
မှတ်ချက်ချလောက်အောင် ကို သူ့အမေကလည်း သူ့သားလို
ကလိမ်ကကျစ်စကားပြောတာပေါ့ဗျာ (အင်းပေါ့ဗျာ အမေကိုက
မိန်းမချင်းကိုယ်ချင်းမစာမှတော့ သူမွေးတဲ့သားက ယောင်္ကျားကတိမတည်တာ
အဲဒီ့လို ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးကတည်းက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို
ကိုယ်ဝန်အခြေအနေတောင်ဖုန်းဆက်မမေးတာ ဒီနေ့ထိဆို တစ်လပြည့်တော့မယ်...။
ဒီကိုယ်ဝန်က သူ့သားနဲ့ရတဲ့ သူ့မြေးပါ.....(သူအလှည့်ခံရမှာစိုးလို့သာ
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမှာ သူတို့တစ်နေ့ လာတောင်းနိုးနဲ့
မျှော်နေလိုက်တာ ခုဆို ဗိုက်လည်း ဖုံးဖိလို့မရတဲ့ အနေအထားပေါ့.....။
သူ့အလုပ်ထဲမှာလည်း အရှက်က ကွဲ...တကယ်ဆို သူ အဲဒီကောင့်ကို စိတ်နာနေတာပဲ
ဖျက်ချလိုက်လို့ရတယ်လေ....ဒါပေမယ့် မွန်မြတ်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်စိတ်
သူ့ဆီမှာ အပြည့်ရှိ်နေတယ်....ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ကို
လေးစားပါတယ် ရင်လည်းနာတယ် ဒါပေါ့ဗျာ မတန်မရာလူအတွက်
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမိန်းကလေး ယောကျာင်္းလေးတွေအားလုံး သူ့ကွယ်ရာမှာ
သူ့အကြောင်းကြားကြားပြီးချင်း ကျွန်တော့် ကောင်မလေးတောင် ယောကျာင်္းတွေက
ဒီလိုပဲလားဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို စကားနာထိုးလို့ ကျွန်တော်တို့
အမှန်တော့ ဒီလိုကောင်မျိုးရှိလို့ ကျွန်တော်တို့ ယောကျာင်္းတွေ အကုန်
ကျွန်တော်တို့တွေကရော သူ့ဆွေမျိုးတွေကပါ ဒီကောင်နဲ့ ဒီကောင့်မိသားစုကို
တရားစွဲဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်.....။သေချာတယ်နော် ဒီကောင့်ကို တရားသာစွဲရင်
အမှုက မနည်းဘူးဗျ။သက်သေတွေ ခိုင်လုံနေတယ်လေ.....။အနည်းဆုံးတော့ ၁၀
တိုင်ပင်ကြပြီးပြီ...။ဒါပေမယ့် လူမဆန်တဲ့ အဲဒီ့မိသားစုကို
ကိုယ်ချင်းမစာသင့်ဘဲ ကိုယ်ချင်းစာပေးလိုက်တဲ့ မိသားစုကတော့
ဒီကောင့်မိသားစုက ငပေါတွေလို့များ ထင်နေကြလားမသိဘူး....။ကျွန်တော့်
သူငယ်ချင်းကောင်မလေးခမျာ သူ့ဖာသာသူ ကလေးကို အဝေးမှာ တစ်ယောက်တည်း
သွားမွေးဖို့ နေရာရှာပြီး ပိုက်ဆံစုနေရပါတယ်.....။
သူတစ်ယောက်တည်း ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ လူ့လောကထဲ အရောက်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတာ
ဘယ်လောက်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ မိန်းမလဲ.... ။ ။
ဒါကြောင့် online ပေါ်က သူငယ်ချင်းအားလုံးကို
မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်....ဒီယုတ်မာတဲ့ မိသားစုနဲ့ ယုတ်မာတဲ့ အဲဒီ့ကောင်ကို
ဖုန်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လမ်းတွေ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲပေးကြပါဗျာ....။
လက်လှမ်းမီရာ မိန်းကလေးတိုင်းကိုလည်း forward Mail နဲ့ ပို့ပေးကြပါ။
မိန်းကလေးတွေ ထပ်ပြီး နစ်မွန်းမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ....။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ချစ်သူချင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်လို့
တာဝန်မယူတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ယောကျာင်္းထုကြီးကို
ဒီကောင်လှမင်းထွန်း ကို ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးက ရင်ထဲကနေ
ကျိန်ဆဲနေကြတာပါ...online Friend တွေ အားလုံးလည်း ကူညီပြီး
ကျိန်ဆဲပေးကြပါ...။နှမချင်းစာနာရင် ကူညီပြီး ဒီကောင့်ကို
ပြောရဦးမယ် ဒီကောင့်မှာ သိပ်ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာမှ မလုပ်ပေမယ့်
အဲဒီ့မိန်းကလေးက သူ့အစ်ကို အတွက် ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပေးရဦးမယ်...။
သူ့အမေအတွက်လည်း ရင်နာစ၇ာ အဖြစ်မျိုး ဖန်ဆင်းပေးရဦးမယ်.....။
ရန်ကုန်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအတွက်.....မန္တလေးက ကောင်မလေးအတွက်ရော
ဒီကောင့်ညီမက သူ့ဘ၀လှလှလေးကို ဒီကောင့်တစ်မိသားစုလုံး ရင်ကွဲအောင်
ဒီကောင့်ရဲ့ နောင်ဖြစ်ထွန်းလာမယ့် သမီးမိန်းကလေးသာဆိုရင်
မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀အတွက် ...........။ ။
online Friend တွေအားလုံး လည်း သိမှာပါ ကိုယ်ပြုသည့်ကံအတွက်
ဒီတနှာကောင် လှမင်းထွန်း ကို online Friend အားလုံးက forward လုပ်ပေးရုံသာမက
အပြင်က လူတွေကိုပါ လူယုတ်မာတစ်ယောက်အကြောင်း ဗဟုသုတရအောင် ပြောပေးကြပါ။